यससँग साझेदारी गर्नुहोस्:
हर्जलिच विल्कोममेन मा ह्यान्ड्स अफ - बच्चा दुरुपयोग रोक्नुहोस्
हामी बच्चाहरूको बिरूद्ध यौन हिंसा रोक्न र सुरक्षाको लागि प्रतिबद्ध छौं।
टीमको हिस्सा बन्नुहोस्
हामी प्रत्येकका बारे खुसी छौं जसले हामीलाई समर्थन गर्दछ र बच्चाहरूलाई बचाव गर्न चाहन्छ।
हाम्रो स्ग्रहले बच्चाहरू विरुद्धको यौन हिंसामा 5000००० भन्दा बढी विश्लेषणित समाचार पत्र लेखहरू समावेश गर्दछ।
एक राम्रो कारण को लागी अब चन्दा दिनुहोस्!
प्रत्येक दानले धेरै व्यक्तिहरूमा पुग्न र थप बच्चाहरूलाई मद्दत गर्दछ।
बच्चाहरू र वयस्कहरूले यौन दुरूपयोगका लक्षणहरू साथसाथै पेडोफाइल, उदासीनता र यौन उन्मुख अपराधीहरूलाई समयमै मान्यता दिनु पर्दछ। हामी शिक्षा र रोकथाम कार्यहरू मार्फत यसमा योगदान दिन चाहन्छौं।
जनवरी २०२१ मा प्राप्त भयो
समर्थकहरूले हामीलाई हरेक दिन मद्दत गर्छन्
हामी धेरै वर्षदेखि बच्चा संरक्षणको लागि प्रतिबद्ध छौं
हामी --3 वर्ष उमेरका बच्चाहरूलाई यौन हिंसाबाट उनीहरूको रक्षा गर्न पुस्तकमा काम गर्दैछौं। पुस्तकले बच्चाहरू, अभिभावकहरू, तर शिक्षकहरू र दैनिक आधारमा बच्चाहरूसँगै काम गर्ने सबै व्यक्तिहरूको लागि रोकथाम सजिलो बनाउँदछ।
एसोसिएसन "ह्यान्ड्स अउड - बाल दुर्व्यवहार रोक्नुहोस्" भन्ने वकालत गर्दछ कि यो पुस्तक डेकेयर सेन्टर, विद्यालय र अभिभावकहरूको लागि नि: शुल्क उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
जर्मनीमा er 56,००० किन्डरगार्टन र डे केयर सेन्टर, स्विजरल्याण्डमा १ 000,००० र अष्ट्रियामा १०,००० भन्दा बढी बच्चाहरूमा पुग्न, हामीलाई प्रिन्टिंग लागत र वितरणका लागि आर्थिक सहयोगको आवश्यकता छ। जर्मन भाषी मुलुकहरुमा करीव २ grade,००० प्राथमिक र प्राथमिक विद्यालयहरु छन् जुन पहिलो कक्षामा करीव 15००,००० विद्यार्थी छन् जसलाई पनि शिक्षा आवश्यक छ।
हाम्रो वेबसाइटमा तपाइँ हाम्रो सम्बन्ध बारे मा अधिक जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ www.leoloewe.com पुस्तक परियोजना को पहिलो छाप।
तपाईको समर्थनका लागि धन्यबाद।
संघको निर्देशक बोर्ड, बुबा र नागरिक,
मार्क सी। Riebe।
मुद्दा विश्लेषण गरियो
यो तपाई बिना काम गर्दैन!
यो तपाईंको हातमा छ!
सबै अनुदानको%%% सीधा बच्चाहरूमा जान्छ
बच्चा सुरक्षाका लागि तपाईको चन्दा
सबै दानहरू प्रत्यक्ष हिंसा रोकथाम गर्न जान्छन्
$ १,15,000,००० उठायो
लक्ष्य $ १,150,000,०००
हामी समितिमा छौं
आज पनि अधिकांश व्यक्तिहरू अर्को तरिकामा हेर्छन् जब यो डरलाग्दो र यसैले वर्जित विषयको कुरा आउँदछ।
हाम्रो कामको साथ हामी यो तथ्यमा योगदान दिन चाहन्छौं कि बालबालिकाले मात्र वयस्कहरूले यौन दुर्व्यवहारका लक्षणहरूसँगसँगै पेडोफाइल, दुराचारी र यौन उन्मुख अपराधीहरूलाई पनि राम्रो समयमा पहिचान गर्न सक्दछन् र उचित प्रतिक्रिया दिन सक्छन्। उनीहरूलाई यसका बारेमा कुरा गर्न शक्ति प्रदान गर्नुपर्दछ (तर त्यो अपराधी आफैसँग होइन, किनकि उसलाई चेतावनी दिनुहोस्)।
यो स्पष्ट हुनुपर्दछ कि सतर्क न्याय एक विकल्प होइन। जे होस्, सबैलाई सचेत हुनुपर्दछ कि तिनीहरू जटिल छन् वा दण्डनीय छन् यदि दुरुपयोगको ज्ञान छ भने, यो तर बाल सुरक्षा प्राधिकरण वा पुलिसलाई रिपोर्ट गरिएको छैन wird।
हाम्रो समाजमा यो सबै हुन्छ
वेबसाइटको साथ Hands Off हामी जर्मनी, अस्ट्रिया, स्विजरल्याण्ड र विश्वव्यापी रूपमा प्रत्येक नगरपालिका वा शहरमा यस शीर्षकको सीमा देखाउँदछौं।
फिल्म श्रृंखला "अपरेशन चिनी", मुख्य अभिनेत्री नाडजा Uhl वा फिल्म संग"शिकार पार्टी"चुनौतिहरुको राम्रो प्रतिनिधित्व गर्नुहोस्। दुर्भाग्यवश, मुख्य जिम्मेवार जर्मन आन्तरिक मन्त्री थॉमस दि माइजिएरसँग कागजात छ"स्याक्सन दलदल"सबै एआरडी मिडिया लाइब्रेरीहरु बाट हटाउनु पर्छ।
फिल्म प्यानलको छलफलमा बिहान .:१। बिहान देखाइएको थियो सान्ड्रा माइसबर्गर विस्तृत रूपमा छलफल भयो। विल्हेल्म रिग्रीग, यूबीएसकेएमले समेत भने कि उनी बच्चाहरूको हत्याबाट पनि सचेत छन्।
संख्या, डेटा, तथ्यहरू
एक बिलियन डलर व्यवसाय
3० लाख भन्दा बढी बच्चाहरू हाल कैदमा परिरहेका छन् (रिपोर्ट नगरिएका घटनाहरूको संख्या धेरै बढी हुने सम्भावना छ)। उद्योग जसले बाल दुर्व्यवहार छविहरू र सम्बन्धित भिडियोहरूसँग डील गर्दछ Billion 30 अर्ब (रिपोर्ट नगरिएका मुद्दाको संख्या पनि धेरै बढी हुनुपर्दछ) पानी निकाल्नु पर्छ।
आईटी जहिले पनि हुन्छ - मेरो क्षेत्रमा मात्र होइन!
धेरै व्यक्तिहरू अझै यसलाई विश्वास गर्छन्। तर संख्याले फरक भाषा बोल्छ: बाल यौन दुर्व्यवहार हाम्रा माझमा छ। हाम्रो समाजको अवांछित अंश हो जुन अवाक् र क्रोधित बनाउँछ - र हामीलाई कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ।
जर्मनीमा त्यहाँ आधिकारिक रूपमा छन् १,15,000,००० बाल दुर्व्यवहार विज्ञापन, तर रिपोर्ट नगरिएका केसहरूको संख्या धेरै बढी छ। डब्ल्यूएचओको अनुमानले यो हो कि सुझाव दिन्छ करीव १ लाख जर्मनीमा केटी र केटाहरूलाई प्रभावित, यदि एक हो भने १.18..XNUMX मिलियन बच्चाहरू र युरोपमा युवाहरू।
जर्मनी मा हरेक स्कूल कक्षा मा बस्नुहोस् १-२ बच्चाहरूजो यौन दुर्व्यवहारबाट प्रभावित छन्।
बारेमा १० मध्ये9वटा केस बाल दुर्व्यवहारको पत्ता लागेन।
Rators०-80०% अपराधीहरू हुन् नर, १०-२०% महिला.
बच्चा संरक्षण संगठन
यो गर्नका लागि हामी संस्था जस्ता सहयोग गर्दछौं Thorn.org, जो डेमी मूर र एश्टन कुच्छर वा द्वारा सह-स्थापना गरीएको थियो सञ्चालन भूमिगत रेलमार्ग टिम बलार्ड द्वारा हाम्रो, जसले पहिले नै देश र विदेशमा १,1300०० भन्दा बढी बच्चाहरूलाई बन्दी बनाउने र अन्य बाल सुरक्षा संगठनहरूबाट मुक्त गरिसकेको छ।
यो हाम्रो माग पनि हो कि सीमाहरूको विधान retrospectively हटाउनु पर्छ। बच्चाको रूपमा दुर्व्यवहार भोगेका सबै महिला र पुरुषले आफ्नो यातना दिनेलाई रिपोर्ट गर्ने अवसर पाउनुपर्दछ।
दुर्व्यवहार छविहरूका सबै केसहरू इन्टर्पोल, बीकेए वा अन्य अधिकारीहरूलाई रिपोर्ट गरिनुपर्दछ र उनीहरूसँग व्यवहार गर्नुपर्दछ जुन अब १०% भन्दा कम केसहरूमा गरिन्छ। यसका लागि डाटा रिटेन्सनको कानूनहरू सकेसम्म चाँडो परिवर्तन हुँदैछन्, के को लागि नीति को लागी बोलाइएको छ। कानूनी परिणामहरूमा समान लागू हुन्छ। स्विट्जरल्याण्डमा अझै पनि बाल दुर्व्यवहार चित्रको कब्जाको लागि जरिवाना वा निलम्बन गरिएको सजायहरू लगाउन सकिन्छ। जर्मनीमा पसलबाट चल्ने व्यक्तिलाई गालीगलौज गर्ने व्यक्तिलाई भन्दा कडा सजाय दिइन्छ।
पोल्याण्डमा अनिवार्य रासायनिक कास्ट्रेसन शुरू भएको थियो। जबकि यो चरम देखिन्छ, कम्तिमा सबै अपराधीहरु को 50०% भन्दा बढी पुन: संचार। यहाँ पनि राजनीतिज्ञहरुलाई नजरबन्द र उपचारको क्रममा उचित कवच कदम चाल्न भनिएको छ ताकि अपराधीहरु उचित मनोवैज्ञानिक हेरचाह प्राप्त गर्न सकून्। यो एक कहिल्यै न समाप्त हुने कहानी हो जुन ASAP रोक्न आवश्यक छ!
रोकथाम सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो। हामी किंडरगार्टनहरू र स्कूलहरूमा नाटकहरूको मञ्जूरी समर्थन गर्दछौं जसले बच्चाहरूलाई तिनीहरूको शरीर तिनीहरूसँग सम्बन्धित छ भनेर देखाउँदछ।
हामी एक ग्लोबल सिर्जनामा ​​काम गर्दैछौं "एम्बर अलर्ट“त्यसोभए, अमेरिकामा जस्तै, हरेक अपहरणको घटना रिपोर्ट गर्न सकिन्छ। यो एक स्वचालित अलार्म सन्देश र साइरन अलार्म सन्देश हो जुन केही मिनेटमा सबै व्यक्तिको मोबाइल फोनमा प्रदर्शित हुन्छ जुन अपहरण साइटको निश्चित दायरा भित्र हुन्छन्। यो बच्चाको सुविधाहरू र अपहरणकर्ताको विवरण र विवरणको साथ देखा पर्दछ (उदाहरण लाइसेन्स प्लेट)।
विशेष वकिल र माथि उल्लेखित संगठनहरूको साथ, हामी सक्रिय रूपमा अपराधीहरूबाट जोखिममा बच्चाहरूलाई जोगाउन मद्दत गर्दछौं। थप रूपमा, हामी सक्रिय रूपमा अपराधीहरू विरूद्ध मुद्दा चलाउँछौं ताकि उनीहरूलाई उचित दण्ड पाइन र पीडितहरूले न्याय भोग्न सक्दछन्।
तपाईंको अनुदान of%% सीधा बाल सुरक्षामा जान्छ!
तपाईं यहाँ DONATE गर्न सक्नुहुन्छ
हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्
© 2021 हात--- off.org । सबै अधिकार सुरक्षित।
कार्यक्रममा शामिल हुनुहोस्